Niko Kovac Oo Isbedel Weyn Ku Sameeyey Kooxda Monaco Xilli Uu Guul Ka Gaaray PSG.
Home Horyaalka France Niko Kovac oo isbedel weyn ku sameeyey kooxda Monaco xilli uu guul...
Niko Kovac wuxuu sheegay in Monaco ay tahay inay baabi’iso xiddigga Kylian Mbappe madaama uu shaaca ka qaaday sida ay kooxda reer France uga yaabisay kooxda heysata horyaalka Ligue 1 ee Paris Saint-Germain.
Monaco ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee garaacda PSG laba jeer hal xilli ciyaareed oo Ligue 1 ah tan iyo Nancy 2011-12 iyadoo uga mahadcelineysa axadii 2-0 ciyaar ka dhacday Paris.
Sofiane Diop ayaa goolasha furay daqiiqadii lixaad ka hor inta uusan daafaca Monaco Guillermo Maripan labo jeer hogaanka ciyaarta ku laabanin qeybtii labaad.
Mbappe waxaa aamusiyay kooxda kaalinta afaraad ee Monaco, kaasoo u dhaqaaqay labo dhibcood PSG iyo lix ka mid ah hogaamiyaasha Lille ilaa 26 kulan.
Intaa ka dib, Tababaraha kooxda Monaco Kovac ayaa u sheegay Canal +: “Aad ayaan ugu faraxsanahay waxqabadka kooxdeyda. Paris waa koox weyn.
Waxaan si adag u ciyaarnay 90 daqiiqo waana u qalanay guusha. Ma aysan helin fursado badan. Waa inaan u hambalyeeyaa ciyaartoydeyda.
Qorshaheenna? Waa inaan tirtirnaa Kylian Mbappe maxaa yeelay waa weeraryahan weyn. Kaga tuur kubbada adoo sedex ama afar ah. Dhanka daafaca, waxaan soo bandhignay waji kale oo Monaco ah, sababtoo ah ma aanan gaarin fursado badan.
Caawa wuxuu ahaa mid cajiib ah. Tani waa waxa aan u baahanahay. Waxaan ku guuleysanay inaan garaacno PSG markii labaad, hadda guriga ayaan ku tageynaa oo aan nasan doonnaa.
Kooxda Kovac ee Monaco ayaa guuleysatay lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay marti ahaayeen Ligue 1 – kaliya Lille ayaa ka badan oo toddobo haatan socta.
Guushii ugu dambeysay ee Monaco ay ka gaarto garoonkeeda ugu sareysa ayaa aheyd Febraayo-Ogosto 2017 (sideed).
Saddexda ugu sarreysa? Sidii aan horeyba u sheegay, inta badan waa inaan kordhinaa farqiga shanaad iyo lixaad, ”ayuu raaciyay tababarihii hore ee kooxda Bayern Munich Kovac, kaasoo ku hogaaminaya Monaco inuu ku soo laabto kaalinta labaad ee Ligue 1, isagoo ku dhacay kaalinta sagaalaad iyo 17aad labadii xilli ciyaareed ee hore.
Weli waxaa jira dhowr ciyaarood, haddii aan fursad u helno inaan xirno farqiga markaas waan sameyn doonnaa. Laakiin wali ma nihin heerka saddexda hore.
Previous articleMouse Dembele oo ku dhiban Atletico Madrid iyo horyaalkaba.
Next articleLionel messi iyo kooxo badan oo fariin u direen Ronaldinho.